फलफुलको बोक्रा फाल्ने बानी छ? नफाल्नुस् यस्ता छन् फाइदाहरु Tapaiko Khabar
फलफुलको बोक्रा फाल्ने बानी छ? नफाल्नुस् यस्ता छन् फाइदाहरु
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : पुस २४, २०७५ शिक्षा-स्वास्थ्य
विशेष गरेर तरकारी तथा फलफूलमा फाइबरका एक किसिम भिसकस फाइबर ले यस कार्यमा विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ । थुप्रै अध्ययनहरुले देखाएअनुसार फाइबर बढी भएको खानेकुराले मानिसहरुलाई चाँचाँडो भोक लाग्न दिँदैन । यसको अर्थ, छिटोछिटो र बढी खानेकुरा खानुपर्ने अवस्थाबाट पनि यसले हामीलाई बचाउँछ । अर्थात् भोजनको माध्यमबाट शरीरमा अनावश्यक क्यालोरी हाल्ने अवस्थाबाट पनि यसले हामीलाई रक्षा गर्छ । यसको सोझा अर्थ के हो भने, हाम्रो शरीरको तौल अनावश्यक रुपमा बढ्न नदिनको लागि पनि फलफूल तथा तरकारीको बोक्राले कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गरिरहेको हूतछ ।
यस भन्दा अगाडीउकालो लाग्यो सुनको मूल्य, आज कति ?
यस पछिकिम जोङ रेल मार्फत चीन भ्रमणमा
लामखुट्टेले टोकेर हैरान हुनुहुन्छ? अपनाउनुहोस् यस्तो उपायहरु
युगान्डामा पहिलोपटक इबोला भेटियो
गर्भवतीलाई घरमै भिडियो एक्स- रे सेवा